Archive du 20190423
Marc Ravalomanana “Tsy kitihana amboletra ny lalàmpanorenana”
Tsy niandry ela fa nanao fanambarana lehibe teny Faravohitra eo anatrehan’ny fikatsahan’ny fanjakana ankehitriny hikitika sy hanitsy ny lalàmpanorenana ka hanaovana fitsapan-kevi-bahoaka mirazotra amin’ny fifidianana depiote ny 27 mey ny avy amin’ny Antoko Tiako I Madagasikara tarihin’i Marc Ravalomanana sy ireo Birao politika, miampy ireo kandida solombavambahoaka atolotry ny TIM omaly takariva. Isan’ny teny atao voalohany indrindra amin’ny fihanianan’ny Repoblika ny hanaja ny lalàmpanorenana sy hitandro toy ny anakandriamaso azy io, ka nanaitra sy nampieritreritra ny hoe: moa ve izany tena manaja ny lalàmpanorenana io? Hoy i Marc Ravalomanana.
Antenimierandoholona Hofoanan-dRajoelina tokoa…
Noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra ny 19 aprily lasa teo ny didim-panjakana laharana faha-2019-790 manaika ny mpifidy handatsa-bato amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka mifanindran-dàlana amin’ny fifidianana depiote amin’ny 27 mey ho avy izao. Misy andalana tian’ny mpitondra hovaina, toy ny fanafoanana ny antenimierandoholona. Eo ihany koa ny fanovana ny Lehiben’ny Faritra ho Governora, izay raha ny lalàna dia fidiana ny lehiben’ny faritra, ka mety tetika hanamafisana orina ny fahefana io mba ho olona tendrena no hitondra ny faritra fa tsy handalo fifidianana.
Alain Mahavimbina « Loza ny fampiarahana ireo fifidianana roa ireo »
Niteraka resabe indrindra eo amin’ ny raharaha politika ny fampiarahana ny fifidianana solombavambahoaka izay hatao amin’ ny 27 mey izao amin’ ny fitsapa-kevi-bahoaka. Anton’ izany ny hanitsina ireo andininy vitsivitsy ao anatin’ ny lalàmpanorenana. Ara-dalàna ny fampiantsoana ny mpifidy ataon’ ny filoham-pirenena saingy kosa tsy azo hampiarahana ny fifidianana solombavambahoaka sy ny fitsapa-kevi-bahoaka, hoy Alain Mahavimbina, mpahay lalàna.
Fanendrena mpiasam-panjakana ambony Anjakan’ny bizina sy ny kolikoly avo lenta…
Mitarazoka ny fanendrena ireo mpiasam-panjakana ambony. Betsaka ny toerana no banga ary be ny asa miantona noho izany. Raha ny feo heno dia maro ireo manodidina ny filoha no mangataka "gouter" amin’ireo olona mety ho voatendry. Raha tena izay tokoa ny zava-misy, dia lojika be raha lasa bizina io, ka tsy atao mahagaga raha tsy mandeha amin’izay laoniny ny raharaha sy ny asam-panjakana satria mety izay manam-bola no ho tafiditra fa tsy ny traikefa no mikaonty. Rehefa tonga ao dia ny hanonitra ny vola lany nidirana tao aloha no zava-dehibe.
Andry Rajoelina Tonga saina fa tena ilaina ny Fiangonana
Niara-nankalaza ny Paska niaraka tamin’ireo kristianina tao amin’ny Ekar Notre Dame de Lourdes , ao kaominina Ambatomiady, distrikan’Antanifotsy, ny alahady teo ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, mivady. Ny volana aogositra lasa teo, raha nangataka fanampiana ny mpino ao amin'ity fiangonana ity, nony ezaka fanamboarana fiangonana no nilazan’ny filoha fa hiantoka ny ilaina rehetra ny tenany. Nandritra ity lamesa ny alahady teo ity no nanolorany ihany koa ny lakolosy goavana izay milanja 250kg ho an'ny Ekar Ambatomiady.
Ho avy ara-toekaren’i Madagasikara Mampanahy hatrany
Anisan’ny tombony be ho an’i Madagasikara ny fananany natiora miavaka sy mponina izay afaka miasa tsara sy mafy. Hatreto anefa dia tsy hain’ny mpitondra fanjakana ny manome lanja sy vahana izany ary tsy misy akony amin’ny toekarena mihitsy. Tahaka ny tsy misy vahaolana mihitsy ny sehatra fambolena sy ny indostria, izay hita ho mikatso hatrany kanefa tena iankinan’ny toekarena .
Rongony mahery vaika 40 kilao tratra tao Toamasina
Rongony amin’ilay tena mahery vaika na “héroïnes” 40 fonosona tokony 1kg isan’isany no saron’ny sampan-draharaha miady amin’ny fikambana-jiolahy sy ny avy amin’ny Borigady misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina sy ny Polisin’ny FIP ao Toamasina omaly tolakandro. Teratany Afrikanina miisa 5 no nitondra azy ireo, niainga avy any Sainte Marie nihazo an’i Toamasina tamin’ny alalan’ny sambokely “El Condor”.
Paska nivadika ho zava-doza Telo mianaka natelin’ny ranomasina
Semban-drahona ny fetin’ny paska ho an’ity fianakaviana iray nisafidy ny niala sasatra tao Fenerivo atsinanana ity. Telo mianaka be izao, izay olona avy any Antsirabe niala sasatra no indray natelin’ny ranomasina nandritra izany. Tovovavy 14 taona sy 17 taona ary ny rain’izy ireo izao maty izao izay avy any Antsirabe ny fiavian’izy ireo.
Fitiavam-bola aman-karena Fasana 50 nokorontanina ambony ambany
Ravan’ny siansa sy ny fivavahana vahiny sasany ny fanajana ny razana izay heverina fa mananjina. Ankoatra ny halatra taolam-paty, fikarohana ny vola sy harena nampitondraina ireo razana araka ny fomba no manosika ireo olondratsy mamaky fasana. Noho ny fahantrana lalina ihany koa no mahatonga ny tsy mataho-tody manaotao foana toy izany. Nitrangana vaky fasana niseho lany tao Belalanda, Toliary.